Mazano eako eCommerce SEO mushandirapamwe wekubudirira | ECommerce nhau
Kumhanya iyo campaign campaign inogona skyrocket kutengesa kana zvikaitwa nemazvo uye nemazvo. Hapana mubvunzo kuti kana iwe uine chitoro chepamhepo uye usiri kuita SEO parizvino, unogona kunge uchikuvadza bhizinesi rako redhijitari. Asi iwe uri munguva yekugadzirisa dambudziko iri kuburikidza ne SEO mushandirapamwe weCommerce. Iine akateedzana matipi isu atichazokupa iwe muchinyorwa chino.
Tevere isu tichaenda kunonyora akateedzana emakiyi ekuvandudza iyo SEO kumisikidza yeecommerce yako. Uine chinangwa chechipiri, kune rumwe rutivi kuti uzviise uri nani zvakanyanya mumadhijitari enetiweki, uye kune rimwe divi kuti uzvitsauranise kubva kune vakwikwidzi vako vakuru. Ivo vari mushure mezvimwe zvezvinangwa zvinonyanya kudikanwa zvine vanamuzvinabhizimusi muchikamu chedigital.
Kubva pane yakajairika nzira, SEO kumisikidza ecommerce yave zvishoma zvishoma pane yakakosha chishandiso che kuburitsa mari muzvitoro zvepamhepo. Mune mamwe mazwi, ndiwo mugero waunogona kushandisa kubva ikozvino kuve nemari yakawanda mumutsara webhizinesi rako mukati meichi chikamu chakakosha mukati mehupfumi hwenyika nehwekunze.
1 Seo mushandirapamwe: tsanangura mazwi akakosha
2 Gadzirisa zvikamu pawebhusaiti
3 Bhadhara basa rakanaka rekugamuchira
4 Dhizaina menyu inokwezva kwazvo
5 Ita ongororo inoshanda nharaunda yako
Seo mushandirapamwe: tsanangura mazwi akakosha
Kuti yako SEO mushandirapamwe weCommerce ubudirire, iwe uchafanirwa kushandisa zano iri mukushambadzira kwanhasi. Uye izvo izvo, zvichave zvakakosha kuti iwe uite chidzidzo kune zvese zvigadzirwa uye masevhisi atinopa, izvo zvigadzirwa zvikamu uye bhizinesi mazwi akakosha. Ichave iri nzira inoshanda kwazvo yekumisikidza chitoro chako kana bhizinesi repamhepo.
Ndichiri kune rimwe divi, chishandiso chaungakwanise kuzadzisa izvi zvinangwa zvatiri kuzopa pazasi.
Gadzira traffic kuenda kuchitoro chepamhepo chaunomiririra panguva ino.
Tora huwandu hukuru hwevatengi kana vashandisi kushambadzira zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu.
Inokwezva huwandu hwakawanda hwevashanyi kuitira kuti vagone kuve nehanya nekuita maitiro ebhizinesi kubva mukuwedzera kwehukama pakati pemativi ese.
Edza kusiyanisa uye gadzirisa chinzvimbo chako kupikisana nemakwikwi sezvo isu tisingakwanise kukanganwa kuti ichi chikamu chine kwakawanda kukwikwidzana pakati pemakambani ese. Uye ndeipi nzira iri nani yekumira kunze kuburikidza nekumira kwakakodzera SEO.
Uye zvakare, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuona aya mazwi ipfuma chaiyo yatisingakwanise kuzvidza chero nguva. Kunyanya pakutanga kwemhando iyi yemabhizinesi mitsara mune online fomati.
Kukwezva kwemhando yepamusoro traffic, inova iyo iyo mushure mezvose ichave iri mukutarisira kwekutenga mune yedu ecommerce. Pamusoro peimwe nhevedzano yekufunga kwehunyanzvi iyo ichadzidzwa mune zvimwe zvinyorwa.
Uye kune rimwe divi, chokwadi chiripo nguva dzose kuti inzira inoshanda kwazvo yekusimudzira mamwe marongero mukushambadzira kwemazuva ano anoitirwa monetize bhizimusi parameter yekambani yemhando idzi.
Gadzirisa zvikamu pawebhusaiti
Hapana mubvunzo kuti imwe yemhosho dzinowanzoitika kugadzira iyo mapoka peji uko kunongoratidzwa runyorwa nezvose zvigadzirwa zvinoratidzwa, pasina chero rumwe ruzivo nezvazvo. Kunze kweyekuti zano rekushambadzira rino gumira kutengesa kwako, hazvisi zvechokwadi kuti pakupedzisira tinowana mamwe matambudziko nemajini ekutsvaga mumadhijitari enhau.
Kugadzirisa ichi chakakosha tekinoroji chiitiko, isu hatizove neimwe sarudzo kunze kwekupa rondedzero yechimwe nechimwe chigadzirwa chikamu, ne mashoko akakodzera Kune vashandisi. Zvekuti nenzira iyi, ivo vane ruzivo rwakakura nezve izvo isu zvatinopa kwavari nguva dzese. Mupfungwa iyi, inogara ichinakidza pakuratidzira zvigadzirwa kusanganisa ndima diki kana tebhu ine inonakidza uye yakakosha ruzivo kune mushandisi kana mutengi.
Iyo yekupedzisira inoshanda pamusoro pese kuzvitsauranisa pachedu kubva kune zvatinokwikwidza 'zvigadzirwa, uye nenzira iyi kuunza yakawedzera kukosha kune iko kupihwa kwatiri kuita kubva kuchitoro chedu chepamhepo. Nepo kune rimwe divi, ichatikurudzira kuti tizivikanwe zvirinani, kwete chete pakati pevatengi, asi muchikamu chatiri. Ndiine chinangwa chezvirevo nezve izvo isu zvatinonyatsoda kuwana kubva zvino zvichienda mberi.
Bhadhara basa rakanaka rekugamuchira
Kusarudza yakanaka yekugamuchira sevhisi kuchitoro chedu chepamhepo, tinofanirwa kufunga kushandisa nhevedzano yezviito zvinogona kubatsira zvakanyanya kune zvido zvechitoro chedu kana kutengeserana kwedigital. Semuenzaniso, mune dzinotevera kesi dzatinoburitsa pazasi:
Kuchengetera mune chakanaka chikamu chemukati icho chako dhijitari bhizinesi chinopa.
Unogona kuve nechokwadi chekuti kubva panguva idzodzo unenge uine iyo yakapusa control panel uye pamusoro pezvose zviri nyore kushandisa uye izvo zvinogona kukubatsira iwe kuvandudza mufananidzo wemakambani ako. Kwete pasina, ndicho chimwe chezvinangwa zvaunoteedzera shure kwezvose.
Iri zano ratovepo rekutanga iro rinogona zvakare kushanda sechishandiso chekumisikidza rakasarudzika sevhisi kubva kune inoshanda nzira.
Ita shuwa kuti mukupedzisira vatengi vako kana vashandisi vanozove nerutsigiro rwavanogona kwavanogona kugadzirisa chikamu chakanaka chekusahadzika kwavo kwakakodzera kubva panguva iyoyo zvichienda mberi.
Dhizaina menyu inokwezva kwazvo
Sezvo iwe uchinyatso kuziva panguva ino, imwe yedzakanakisa nzira iwe yaunofanirwa kushambadzira zvigadzirwa zvako kana masevhisi iri kuburikidza ne visual message zvine simba kwazvo. Kubva pane ino maonero, hapana chinhu chiri nani pane kuita zviito izvi.
Dhizaini inokwezva haina kukosha kuti chitoro chepamhepo chishande, asi chakakosha kwazvo. Kusvika padanho rekuti inogona kuve inoenderana chaizvo poindi yekutsigira nzira yekuwana mari mubhizinesi rako kubva zvino zvichienda mberi. Kune zvinotevera zvinhu zvatinokupa panguva ino:
Iyo inogona kuve kukurudzira kune vashandisi vatsva kuti vashanyire webhusaiti uye nekudaro kuve vangangove vatengi iwe wawanga usina parizvino.
Iwe unogona kutevedzera iwo matsva maitiro mune dhizaini kuti uve wakanyanya kukwikwidza mukati mechikamu. Izvo hazvizokutorere iwe kuyedza kwakawanda uyezve izvo zvakanaka zvaunogona kuwana zvakakwirira kupfuura iwe zvaunofunga pakutanga.
Ita a kutangazve yewebsite yako inogona kunge iri kukunda musika mutsva uyo kusvikira zvino waive wakanganwa mukufungira kwako kwekukura.
Kuti peji rako reecommerce ribudirire zvakakosha kuti iwe ugadzire inoratidzika, inowanikwa menyu uye pamusoro pezvose zvinobvumidza mushandisi kufamba zviri nyore peji rewebhu. Iyi ndiyo imwe yekiyi dzekuwana budiriro muzviito zvako pane izvi chikamu.
Iyo inogona zvakare kuve inokurudzira kutora nzira nyowani kuchitoro chako chepamhepo. Ndokunge, chinja kutarisa kwako kuti uchinje bhizinesi rako modhi kuenda kune rimwe riine vimbiso huru yekubudirira uye iyo inogona kukupa iwe yakawanda nhamba yevatengi kana vashandisi.
Ita ongororo inoshanda nharaunda yako
Hapana mubvunzo kuti kuti uite chinetso chekutanga ecommerce chikuva chaunoda pamusoro pezvose a chirongwa chebhizinesi chinoshanda uye kuti iwe unogona kuzadza kubva zvino zvichienda mberi. Iwe haufanire kutanga bhizinesi rako munzira hombe uye nekudaro uchivaka imba kubva kunheyo. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa kutora hanya nezve diki diki diki uye pasina kupokana ichi chichava chimwe cheakanyanya kukosha kubva kune chero mhando rezano mukushambadzira kwazvino uye kwehunyanzvi.
Mupfungwa iyi, zano rakanaka raunogona kupa izvozvi rakavakirwa pakufunga zviri pamutemo zvinhu izvo online chitoro kana zvemagetsi zvekutengeserana zvinotongwa. Iwe unofanirwa kufunga kuti anotakurwa nemitemo yakati wandei uye kuti chero hutarisiro mune izvi hunogona kukubhadhara zvakanyanya mumwedzi iri kuuya. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kukanganisa zvese kuyedza kwawakagadzira kusvika panguva ino chaiyo. Usazeze chero nguva nekuti iyi ndiyo imwe yekiyi dzekuwana budiriro murudzi urwu rwebhizinesi mutsetse.
Nepo kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti mabhizinesi aya anoda zvakadzama uye zvakadzama kudzidza kuitira kuti iwe ugone kukwanisa kuongorora mamiriro avo ehupfumi uye emari. Kusiyana nerimwe boka remakambani eanonyanya kuchengetedza kana echinyakare kubata. Saka kuti kune rimwe divi, imwe yemafungiro aunogona kuendesa panguva iyoyo ndiko kugadzirwa kwemutengi. Ndokunge, mukudhirowa imwe kana mamwe maprofiles eakakodzera mutengi.
Zvakare nekuchengeta mupfungwa kuti ese mabhizimusi epamhepo haana kufanana uye nekudaro anoda kurapwa kwakasiyana. Mune izvo zvinoita imwe yeakakosha makiyi eako SEO mushandirapamwe weCommerce kuti ubudirire. Kusvika padanho rekuti inogona kutora danho rekunyatso kumisikidza bhizinesi rako mukati mechikamu chauri iko. Hazvitore nhamburiko huru kuti uzviite uine kufarira kudiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Mazano eako eCommerce SEO mushandirapamwe kuti ubudirire